ZTE एक्सन एलिट, विश्लेषण र राय | Androidsis
अल्फोन्सो डे फ्रुटोस | | समीक्षा, ZTE
चिनियाँ उत्पादकहरूको उदय स्पष्ट तथ्य हो। र ZTE एक एशियाई दिग्गज हो जुन युरोपमा हुवेईको अनुमतिले बलियो हुँदै गइरहेको छ। समयमा हामीले तपाईंलाई यसको नयाँ ZTE एक्सन परिवारको केही विवरणहरू देखाउँदछौं, अब हामी तपाईंलाई पूर्णरूपमा लेराउँदछौं ZTE एक्सन एलिट समीक्षा, निर्माताको नयाँ फ्लगशिप र जुन यसको अन्त्य र ग्राउन्डब्रेकिंग डिजाईनको गुणस्तरको रूपमा खडा छ।
विश्वास नगर्नुहोस्, हो, यो पहिलो उच्च-एंड फोन हो जुन निर्माताले प्रस्तुत गर्दछ। केहि यथार्थबाट अर्को छैन; जहाँसम्म अहिले सम्म सबै शीर्ष ZTE उपकरणहरू चीनबाट आएका थिएनन्, रl ZTE एक्सन एलिट हाम्रो देशमा उपलब्ध छ र यो वर्तमान बजारमा सबै भन्दा राम्रो उच्च-अन्त हो।
1 ZTE Axon एलिट यसको बोल्ड डिजाइन को लागी अलग छ
2 प्राविधिक विशेषताहरू ZTE एक्सन एलिट
3 उच्च HD प्यानलको साथ पूर्ण HD डिस्प्ले
4 ZTE एक्सन एलिटमा सुरक्षा धेरै नै छ
5 सफ्टवेयर जुन यसको प्रदर्शनमा छैन
6 धेरै प्रीमियम टर्मिनलका लागि उत्कृष्ट क्यामेरा
6.1 ZTE एक्सन एलिटको साथ लिइएको तस्वीरहरूको उदाहरण
ZTE Axon एलिट यसको बोल्ड डिजाइन को लागी अलग छ
डिजाईन सेक्सनको साथ हामी यस ZTE एक्सन एलिटको सबैभन्दा विवादास्पद पोइन्टहरू मध्ये एक प्रविष्ट गर्दछौं। मैले तपाईंलाई पहिले नै भनेको यो फोन, तपाईं या त प्रेम गर्नुहुन्छ वा तिनीहरूको डिजाइन घृणा। मलाई भर्खर के भयो।
मैले फोन विभिन्न व्यक्तिलाई देखाएको छु र उनीहरूको प्रतिक्रियाहरू धेरै फरक भए; जबकि केहि डिजाईन मन परेको छ, अन्य लाई फिट छैन नयाँ ZTE प्रमुखको घुमावो।
सुरु गर्न ZTE एक्सन एलिट सुनको रंगमा मात्र उपलब्ध छ, वास्तवमै जोखिमपूर्ण शर्त। जबकि यो सत्य हो कि एसियाली बजारमा सुनका फोनहरू धेरै फेसनशील छन्, विश्वको अन्य कुनामा तिनीहरू यत्तिको सफल छैनन् र हुनसक्छ विभिन्न मोडेलहरू प्रस्ताव गर्नु राम्रो विचार हुने थियो। अन्य खण्ड जसले सबैभन्दा अधिक विवादास्पदको कारण खडा भयो ती ती हुन् अगाडि दुई ग्रिलहरू। एउटा जिज्ञासु विवरण यो हो, यद्यपि यो त्यहाँ देखिन्छ जहाँ पक्षहरू त्यहि स्थित छन्, यो वास्तवमै साधारण गहना हो।
व्यक्तिगत रूपमा मलाई त्यो डिजाइन मनपर्‍योजे होस्, मैले तपाईंलाई पहिले नै भनेको छु कि अन्य व्यक्तिहरूले ती ग्रिडहरू मन पराउने काम समाप्त गरेनन्। तर, सधैं जस्तो, र ,्ग स्वाद को बारे मा। सबै भन्दा राम्रो कुरा यदि तपाई जेडटीई एक्सन एलिट किन्नको लागि विचार गर्दै हुनुहुन्छ स्टोरमा जानुहोस् र यसलाई प्राप्त गर्नु हो।
फोनको राम्रो फिनिश छ, यसको लागि धन्यबाद unibody शरीर कि एक उच्च गुणवत्ता धातु चेसिस खेल। यद्यपि यसको पछाडि, जहाँ फोनको गुणस्तर बाहिर छ, ZTE ले नक्कल छालाले बनेको प्लास्टिकको ब्यान्ड प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो, नोट like जस्तो, जहाँ यसले एन्टेना राखेको छ। परिणाम? फोनको उत्तम सौंदर्यशास्त्र पूर्ण रूपमा ब्रेक गर्दछ। यदि मैले कभरेज नगरीकन एन्टेना लुकाउनको लागि अर्को समाधान खोजेको भए कत्ति राम्रो हुने थियो। निर्माताको कलाईमा सानो थप्पड।
अन्यथा, ZTE Axon एलिट को डिजाईन र फिनिशहरू सबै ताकनाबाट बाहिरिन्छन्। पछाडि हामी फिंगरप्रिन्ट रिडर पाउँछौं जुन यस्तो स्थितिमा अवस्थित छ जुन व्यक्तिगत रूपमा मलाई यसलाई प्रयोग गर्नका लागि सजिलो बनाउँदछ। त्यहाँ मानिसहरू छन् जो फ्रन्टमा बायोमेट्रिक सेन्सर मन पर्छ, तर म यसको पछाडि राम्रो गर्छु। मैले भने, स्वादको बारेमा ...
को फ्रन्ट फ्रेम राम्ररी प्रयोग भएको छ, त्यो ग्रिडको बाबजूद जुन मैले तपाईंलाई बताएको छु, फोन पनि धेरै सन्तुलित छ, आयामहरू र तौलको साथ जुन यसलाई प्रयोग गर्न धेरै सहज बनाउँदछ। यस सम्बन्धमा ZTE बाट एक ठूलो काम।
पकड एकदम राम्रो छ, यसको धातुको अन्त्य भएता पनि। कुनै पनि समयमा मैले सोचेको थिइन कि फोन ड्रप हुँदैछ, केही चीज जुन म प्रशंसा गर्छु। अन्त्यमा, मैले ZTE एक्सन एलिटमा बटनहरू सहज र टिकाऊ पाए। नक्कली छालाको नक्कल गर्ने ती दुई प्लास्टिक ब्यान्डहरूको गणना गरिरहेको छैन, मैले त्यसो भन्नुपर्दछ सामान्यतया, ZTE एक्सन एलिट ले एक ग्राउन्डब्रेकिंग डिजाईन प्रदान गर्दछ र यसको दायरा अनुसार समाप्त हुन्छ।
प्राविधिक विशेषताहरू ZTE एक्सन एलिट
ZTE एक्सन एलिट
आयामहरू 154 x 75 x 9.3 मिमी
वजन 170 ग्राम
अपरेटिङ सिस्टम Android .5.01.०१ L
स्क्रिन IPS LCD .5.5..1920 इन्च १ 1080 २० × ×० पिक्सेल (401०१dpi)
प्रोसेसर क्वालकॉम MSM8994 स्नैपड्रैगन 810 आठ कोर (53 A GHz मा चार A-1.5 कोर र २ GHz मा अर्को Cor Cortex A-4 कोर
राम GB जीबी प्रकार LPDDR3
आन्तरिक भण्डारण माइक्रोएसडी मार्फत १२ Mic जीबीसम्म GB२ जीबी विस्तार योग्य।
रियर क्यामेरा १f मेगापिक्सल + २ मेगापिक्सल डुअल क्यामेरा प्रणाली / अटोफोकस / अनुहार पत्ता लगाउने / दृश्य / एचडीआर / डुअल एलईडी फ्ल्यास / जियोलोकेशन / भिडियो रेकर्डिps f० क्वा गुणवत्तामा f०fps मा
फ्रन्ट क्यामेरा MP MPX / भिडियो 8p मा
कनेक्टिविटी डुअलसिम वाई-फाई 802.11०२.११ ए / बी / जी / एन / डुअल ब्यान्ड / वाइफाइ प्रत्यक्ष / हटस्पट / ब्लुटुथ /.० / एफएम रेडियो / ए-जीपीएस / ग्लोनास / बीडीएस / जीएसएम 4.0० / 850०० / १900०० / १ 1800 ०००; Band जी ब्यान्ड (HSDPA 1900० / 3०० / १ 850 ०० / २१००) G जी ब्यान्ड (ब्यान्ड १ (२१००) ((१900००) ((२1900००) ((2100 ००) १२ (4००) १ 1 (2100००) २० ()००) (3 (२1800००) (० ( २7००) (१ (२2600००)
अन्य सुविधाहरू धातु शरीर / फिंगरप्रिन्ट सेन्सर / accelerometer / gyroscope / द्रुत चार्ज प्रणाली
ब्याट्री ,3.000,००० mAh गैर-हटाउन योग्य
मूल्य १,०१eयुरो
अपेक्षित रूपमा, ZTE एक्सन एलिट वास्तवमै शक्तिशाली टर्मिनल हो समस्याको कुनै पनि अनुप्रयोग वा भिडियो खेल सार्न सक्दछ, धेरै हार्डवेयर आवश्यकताहरूको लागि जुन यसको शक्तिशाली प्रोसेसर र GPU मा धन्यवाद माग्दछ।
एउटा चीज जुन मलाई यस टर्मिनलको बारेमा धेरै चिन्तित गर्‍यो सम्भव अति गरम समस्याहरू थिए। जेडटीईले क्वालकमको विवादास्पद एसओसी, मा शर्त लगाएको थियो स्न्यापड्रैगन 810।। जबकि यो सत्य हो कि यो सुधारिएको संस्करण हो, मसँग मसँग केहि छैन।
भाग्यपूर्वक मेरो सबै डर हटाईयो, राम्रोसँग भनें, जेडटीई एक्सन एलिटले प्रस्तुत गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन देखेर: म दुई घण्टादेखि धेरै खेलहरू खेल्दै छु जुन फोनको सबै हार्डवेयरको गहन प्रयोगको आवश्यकता पर्दछ र कुनै पनि बिन्दुमा मैले जेडटीई एक्सन एलिटलाई अति गरम पाएको याद गरेको छैन त्यसैले टर्मिनल चिसो काम उत्कृष्ट छ।
मलाई कुनै पनि समयमा ढिलाइ वा स्टपको कुनै समस्या भएको छैन, जेडटीई एक्सन एलिटले उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्ताव गर्दछ र दायरा अनुसार यो समाहित हुन्छ। छोटकरीमा, यदि तपाईं हालको ZTE फ्ल्यागशिपले विवादास्पद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन used१० प्रयोग गरेको तथ्यबाट डराउनुभएको थियो भने। प्रोसेसर, तपाईं आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ- ZTE एक्सन एलिटसँग कुनै प्रदर्शन हुने समस्या छैन, उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्ताव गर्दै।
मँ दुई फोनका बारे कुरा गर्न चाहान्छु जुन मलाई यो फोनको बारेमा मनपर्‍यो। एकातिर हामीसँग उसको छ फिंगरप्रिन्ट रिडर, एक बायोमेट्रिक सेन्सर जुन न्यूनतम प्रतिक्रिया समय प्रदान गर्ने आकर्षणको रूपमा काम गर्दछ।
त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अगाडि रहेको छ भन्ने कुरालाई मन पराउँछन् तर म व्यक्तिगत रूपमा यसलाई धेरै सहज पाउँदछु यदि यो पछाडि प्यानलमा राखिएको छ, त्यसैले म जेडटीई एक्सनको बायोमेट्रिक पाठकको स्थितिलाई सफल मान्दछु। र मैले टिप्पणी गरे झैं यो एक हजार आश्चर्य को रूप मा काम गर्दछ।
मैले मनपराएको अन्य विवरण अडियो गुण हो। सावधान रहनुहोस्, ZTE एक्सन एलिटको अगाडि ग्रिलहरू स्पिकरहरू होइनन्, उपकरणसँग एकल स्पीकर छ जसले राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, यद्यपि ठूलो धूमधाम बिना। जहाँ तपाईं आफ्नो छाती जेडटीई पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईंको एक्सन एलिट अडियोको गुणस्तरको साथ छन् जब हेडफोन जडान गर्दा यसको धन्यवाद। डोल्बी प्रणाली, वास्तवमै माथिको माथिको औसत गुण प्रदान गर्दै। संगीत प्रेमीहरू, यस सन्दर्भमा ZTE एक्सन एलिटले तपाईंलाई निराश पार्दैन।
उच्च HD प्यानलको साथ पूर्ण HD डिस्प्ले
ZTE यसको फ्ल्यागशिपको लागि QHD प्यानलमा शर्त राख्न चाहँदैन। यस तरिकाले, उनीहरूले क्वालिटी क्वालिटी गरे पनि, उनीहरूले राम्रो प्रदर्शन पाउँछन्, टर्मिनलको स्वायत्तता बढाउँछन्। Y ZTE Axon एलिट को स्क्रीन कुनै पनि खराब छैन।
र त्यो ZTE Axon एलिट माउन्ट गर्दछa.5.5..XNUMX इन्च IPS LCD प्यानल, एक कम्पोनेन्ट जसको आपूर्तिकर्ता हामी जान्दैनौं, तर जसले उत्कृष्ट गुण प्रदान गर्दछ। यसको ब्याकलाइटि system प्रणालीले उत्कृष्ट चमक प्रदान गर्दछ, तपाईंलाई अत्यन्तै घमाइलो दिनमा पनि कुनै कठिनाई बिना पर्दा हेर्नको लागि र अधिकतममा चमक सेट गर्न आवश्यकता बिना नै अनुमति दिन्छ!
धमिलो प्रकाशको साथ, जेडटीई एक्सन एलिट पाठक प्रेमीहरूका लागि उत्तम सहयोगी बन्न जान्छ किनकि यसको न्यूनतममा चमक कम गरेर हामी यसको पर्दाको चमकबाट विघ्न नपरीकन पढ्न सक्छौं। दृष्टिकोण को कोण लगभग पूर्ण छ र एक धेरै राम्रो स्पर्श प्रतिक्रिया प्रदान गर्न को अतिरिक्त, धेरै बाध्य स्थिति मा एक सानो घाटा मात्र छ।
La तापमान केही चिसो छ र जब हामी शुद्ध सेतो हेर्ने प्रयास गर्छौं यो ब्लुजमा झल्कन्छ, यद्यपि सामान्य रूपमा यो धेरै राम्रोसँग व्यवहार गर्दछ; राम्रो कन्ट्रास्ट र धेरै तीख रंगहरूको दायरा जसले यस सेक्सनमा ZTE द्वारा गरेको महान् कार्य स्पष्ट गर्दछ। संक्षेप मा, एक पूर्ण HD स्क्रीन संग 400 ppp त्यो उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ र त्यो, तीन हप्ता प्रयोग पछि, म उच्च पिक्सेल घनत्व छुटेको छैन।
ZTE एक्सन एलिटमा सुरक्षा धेरै नै छ
ZTE प्रयोगकर्ता उन्मुख सुरक्षाको सेक्सनमा उभिन चाहन्छ र ZTE Axon एलिट यसको स्पष्ट उदाहरण हो। सुरु गर्न ZTE एक्सन एलिटको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ जुन मैले पहिले पनि भनेको छु, रेशमको रूपमा काम गर्दछ, उदाहरणका लागि, पावर बटन थिचे बिना फोन अनलक गर्न। तर कुरा त्यहाँ अन्त्य हुँदैन।
थप रूपमा, एक्सन एलिटसँग एक छ आईरिस स्क्यानर। फ्रन्ट क्यामेरा हामीलाई पहिचान गर्न र उपकरण खोल्न जिम्मेवार छ। पश्चिमी बजारमा टर्मिनल नभएकोले यस प्रविधिलाई मूल रूपमा समाहित गर्ने एक उत्सुक विवरण छ, यद्यपि अभ्यासमा यो एकदम थोरै उपयोगी छ किनभने फिंगरप्रिन्ट चिन्न धेरै समय लाग्छ, चश्मा लगाउने प्रयोगकर्ताहरूको साथमा केही समस्याहरू बाहेक। सब भन्दा सहज कुरा भनेको यसको शक्तिशाली फिंगरप्रिन्ट सेन्सरमा जानु हो।
अन्तमा, यो ध्यान दिनुहोस् कि ZTE एक्सन एलिटसँग पनिaछ आवाज मान्यता प्रणालीजे होस्, म तपाईंलाई पहिले नै भन्दछु कि यो आईरिस स्क्यानर भन्दा हाम्रो आवाज चिन्न यो सुस्त छ, यसले ठूलो संख्यामा पहिचान त्रुटिको उल्लेख नगरे, त्यसैले यो अर्को विकल्प हो जुन उपयोगी भन्दा बढी उत्सुक छ। अवश्य पनि, ZTE बाट कसैले पनि क्रेडिट लिदैन, जो निर्माताहरू मध्ये एक हो जुन यस प्रकारको टेक्नोलोजीमा सब भन्दा बलियो सट्टा लगाउँदैछ।
सफ्टवेयर जुन यसको प्रदर्शनमा छैन
मलाई लाग्छ अक्षम्य छ कि ZTE Axon एलिट अझै पनी Android Lollipop को साथ काम गर्दछ, अधिक यदि हामी फोनलाई ध्यानमा राख्यौं भने त्यो हो। थप रूपमा, ZTE ले कस्टम लेयरलाई "चीनमा बनेको" टचको साथ एकीकृत गरेको छ: कुनै अनुप्रयोग ड्रयरहरू छैन, अनुकूलन मेनूहरू ...
निजीकृत गर्न को मद्दत मलाई धेरै मन पर्छ, यति धेरै छैन फोहरको मात्रा जुन फोनको साथ मानकमा आउँदछ। म त्यो चिन्ताजनक ब्ल्याटवेयर र अनुप्रयोगहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु जुन चिनियाँ निर्माताले परिचय गराउँदछन् र त्यसले थोरै योगदान दिन्छ; अर्को फोटो ग्यालरी वा वेब ब्राउजर के राम्रो छ जुन निश्चित रूपमा क्रोम वा फायरफक्स भन्दा खराब प्रदर्शन गर्दछ?
सामान्य जस्तो सबै अनुप्रयोगहरू मेटाउन सकिदैनयद्यपि हामीले तिनीहरूलाई रोक्न सक्दछौं ताकि उनीहरूले हामीलाई हैरान पार्दैनन्। र यसको GB२ जीबी भण्डारणको साथै यसको माइक्रो एसडी कार्ड स्लटले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंसँग स्पेस समस्या हुँदैन।
धेरै प्रीमियम टर्मिनलका लागि उत्कृष्ट क्यामेरा
ZTE ले एक जोखिम लिन्छ दोहोरो कक्ष प्रणाली तपाईंको नयाँ प्रमुखको लागि। हामीले पहिले नै एचटीसी वन एम in मा यस्तै प्रयोग देख्यौं, यद्यपि मैले व्यक्तिगत रूपमा जेडटीई एक्सन एलिटको रियर क्यामेराको साथ प्राप्त गरेको परिणामलाई अधिक मन परायो।
उज्ज्वल बाहिरी वातावरणमा क्यामेराले उत्कृष्ट कार्य गर्दछ धेरै सूक्ष्म विवरणहरू कब्जा गर्दछ र धेरै उच्च प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। र vहरू स्पष्ट र तीखो देखिन्छन्। कम प्रकाश अवस्थाहरूमा वस्तुहरू पहिल्यै परिवर्तन भैरहेको देखेर ZTE क्यामेराले पीडित छ। धेरै नराम्रो वा कुनै प्रकाश नभएको वातावरणमा, एक्सन एलिट क्यामेराले फोनको विशाल बहुमत जस्तै यसको गुणवत्ता न्यूनतममा कम गर्दछ।
ZTE Axon Elite को डुअल क्यामेराको सब भन्दा चाखलाग्दो पोइन्ट p को साथ आउँछबोकेह प्रभाव संग कब्जा को संभावना, त्यो छनौट धमिलो रिफ्लेक्सको विशेषता। यस अवस्थामा, ZTE एक्सन एलिटले धेरै सफल छविहरू सिर्जना गर्दछ, यद्यपि कहिलेकाँही सानो असमानता देखिन्छ जुन छवि गुणवत्तालाई तौल गर्दछ।
म शक्तिशाली क्यामेरा सफ्टवेयरमा जोड दिन चाहन्छु। ZTE लागू गरियो वास्तवमै पूर्ण ZTE एक्सन एलिट क्यामेरा अनुप्रयोग: यसले खाली ठाउँको राम्रो प्रयोग गर्दछ, विभिन्न मोडमा छिटो र सुविधाजनक पहुँच प्रदान गर्दछ, म्यानुअल कन्ट्रोललाई सक्रिय हुन अनुमति दिँदछ ... संक्षेपमा, एउटा उत्तम सफ्टवेयर जुन म अहिलेसम्म आइसकेको छु।
ZTE एक्सन एलिटको साथ लिइएको तस्वीरहरूको उदाहरण
ZTE Axon Elite को एक गैर हटाउन योग्य ब्याट्री छ 3.000 एमए। यो विचार गर्दा कि यो एक .5.5. inch इन्च को पूर्ण HD स्क्रीन र एक SoC ले स्रोत राम्रोसँग प्रयोग गर्दछ, हामीले एक अपेक्षा गर्नुपर्छ एक दिन र एक आधा दिन बीच स्वायत्तता: त्यो ठ्याक्कै मेरो लागि फोनमा रह्यो।
म यो रातमा चार्ज गर्दछु ताकि मैले फोन मध्य दिनमा जडान गर्नु आवश्यक पर्दैन, तर दुई चारपटक म यसको ब्याट्रीको सही अवधि जाँच गर्न चाहान्छु र जेडटीई एक्सन एलिटले मलाई :15:०० बजेसम्म चलायो। साँझ वा :00:०० बेलुका दिनहरू बिहानको 16:०० मा मेरो दिन सुरू गरेर।
हाईलाइट गर्नुहोस् कि ZTE एक्सन एलिट एक छिटो चार्ज प्रणाली छ त्यसैले हामी आधा घण्टामा आधा ब्याट्री चार्ज गर्न सक्छौं। On 35 मिनेटमा मैले गरेको परीक्षणमा in०% सम्म पुग्न।
ZTE बाट राम्रो काम यसको एक्सन एलिटसँग देखाउँदै कि फॅब्रिनेट उच्च-युरोपेली बजारमा उफान बनाउन तयार छ। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ विवरणहरू सफा गरिनु पर्दछ, विशेष गरी यसको एन्ड्रोइडको पुरानो संस्करण, वा फोहोरको ठूलो मात्रा जुन एप्लिकेसनको रूपमा आउँछन् जुन स्वदेशी स्थापना हुन्छ, तर निश्चित रूपमा मलाई लाग्छ कि एशियाई निर्माताले ठूलो काम गर्यो।
अडियो गुणवत्ता वास्तवमै उच्च छ
बजारको सस्तो उच्च-अन्तको
क्यामेरा सफ्टवेयर अति उत्तम छ
तपाईंले अहिलेसम्म एन्ड्रोइड .6.0.० प्राप्त गर्नुभएको छैन
तिनीहरूको आईरिस स्क्यानर र आवाज मान्यता तपाईंलाई पहिचान गर्न समय लिन्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » ZTE » ZTE Axon एलिट, विश्लेषण र राय
के कसैले यस टर्मिनलको तहको निर्माताको अनुहार तोड्न सक्छ?
हेक्सलक, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र प्रोफाइलसँग उपयुक्त एप्लिकेसन एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरूको सुरक्षा गर्न